Elu bụ ibu ọrụ | KONGOLISOLO
Site na: KongoLisolona: June 12, 2016 00: 05 Enweghị asịsa
Onye ọ bụla nke na-eme nke ọma na-amụta na ihe ịga nke ọma dị n'akụkụ nke ọzọ nke nkụda mmụọ.
Ọ bụ ihe nwute, ụfọdụ enweghị ike ịga n'akụkụ nke ọzọ.
Ndi mmadu n’adighi ebum n’obi ha bu onye agha gha iwe iwe.
Ha na - ekwe ka ewepu onwe ha ime ihe dika ha kwesiri iji mezuo ochicho ha.
Iji merie ihe mgbochi a, ị ga-abanye obi mgbawa, mee ọdịda ọ bụla ka ọ bụrụ ọdọ mmiri, mụta ịmụta ihe mmụta, wee gaa n'ihu.
ụbọchị ịkwụ ụgwọ ụbọchị georgia
Ọkt27 05: 19